Igwefoto Cigarette - OMG Solutions
Category Archives: Igwe Igwe Igwe na-edozi Cigarette
OMG Lighter Camera Izo Ewu HD Spy Camera 1080P True Lighter Camera (SPY117)
HD ọ dịghị igwefoto ọkụ ọkụ nwere igwefoto dị elu, mmemme vidiyo na ụda, igwefoto okirikiri igwefoto, ọrụ ọkụ ọkụ, ọrụ U. Oghere 1920 * 1080P pikselụ, enweghị oghere zoro ezo, bọtịnụ zoro ezo, nwere ike ịmalite ọrụ ọkụ.
Nzuzu zuru okè, na-adịwanye ọkụ karịa nke ahụ na otu ihe dịka ụbụrụ ndị nkịtị. Mgbe ị na-eji ngwaahịa a, biko soro ntuziaka na ntuziaka ntụziaka.
Igwefoto Egwu Zoro Ezo nke OMG (SPY034)
Atụmatụ Nlekọta maka nnweta ụlọ ọrụ
Ikwunye na Gwuo
Nwere ike ịdekọ ruo 1 hour mgbe ị ga-akwụ ụgwọ zuru ezu.
Kọwaa vidiyo ma doo anya na ndekọ ụda
Ọ dị ka ụyọkọ olu; eme ka ịdekọ olu na vidiyo
Na-akwado kaadị micro SD ruo 32GB
Ọ bụrụ na ahapụ ngwaọrụ ahụ na ọnọdụ njikere maka ogologo oge karịa na-enweghị inye iwu ọ bụla, ike ga-emechi ya na akpaghị aka.